1 E nwere otu nwoke n’ala Ọz+ onye aha ya bụ Job;+ nwoke ahụ enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta,+ ọ bụkwa onye ezi omume,+ ọ na-atụ egwu Chineke,+ ọ naghịkwa etinye aka n’ihe ọjọọ.+ 2 A mụụrụ ya ụmụ ndị ikom asaa na ụmụ ndị inyom atọ.+ 3 Anụ ụlọ+ ya dị puku atụrụ asaa na puku kamel atọ na otu puku ehi e jikọrọ abụọ abụọ nakwa narị nne ịnyịnya ibu ise, tinyere ọtụtụ ndị na-ejere ya ozi; nwoke ahụ wee bụrụ onye kasị baa ọgaranya ná ndị Ọwụwa Anyanwụ niile.+ 4 Ụmụ ya ndị ikom gara rie oriri+ n’ụlọ onye nke ọ bụla n’ụbọchị nke ya; ha zikwara ozi wee kpọọ ụmụnne ha ndị nwaanyị atọ ka ha soro ha rie ma ṅụọ. 5 Mgbe a nọzuru n’ụlọ ha niile rie oriri, Job na-ezi ha ozi ma mee ka ha dị nsọ;+ ọ na-ebili n’isi ụtụtụ chụọ àjà nsure ọkụ+ dị ka ọnụ ọgụgụ ha si dị; n’ihi na, Job na-asị, “ma eleghị anya, ụmụ m emehiewo ma kọchaa+ Chineke n’obi ha.”+ Otú ahụ ka Job na-eme mgbe niile.+ 6 O ruru otu ụbọchị, ụmụ ezi Chineke+ bịara guzo n’ihu Jehova,+ ọbụna Setan+ batara kpọmkwem n’etiti ha.+ 7 Jehova wee sị Setan: “Olee ebe i si bịa?” Setan wee zaa Jehova, sị: “Esi m n’ịwagharị n’ụwa+ nakwa n’ijegharị n’ime ya.”+ 8 Jehova wee gaa n’ihu ịsị Setan: “Ì tinyewo obi gị n’ebe ohu m bụ́ Job nọ, na e nweghị onye dị ka ya n’ụwa,+ ọ bụ nwoke na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta,+ bụrụkwa onye ezi omume,+ ọ na-atụ egwu Chineke,+ ọ naghịkwa etinye aka n’ihe ọjọọ?”+ 9 Setan wee zaa Jehova, sị: “Ọ̀ bụ n’efu ka Job na-atụ egwu Chineke?+ 10 Ọ̀ bụ na ị gbaghị ya ogige gburugburu,+ gbaakwa ụlọ ya na ihe niile o nwere ogige gburugburu? Ị gọziwo ọrụ aka ya,+ anụ ụlọ ya agbasawokwa ebe niile n’ụwa. 11 Ma, iji nwee ihe dị iche, biko, matịa aka gị, metụ ihe niile o nwere, lee ma ọ́ gaghị akọcha gị n’ihu gị.”+ 12 Jehova wee sị Setan: “Lee! Ihe niile o nwere dị gị n’aka. Naanị esetịla aka gị metụ ya onwe ya!” Setan wee si n’ihu Jehova pụọ.+ 13 O wee ruo otu ụbọchị, ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom nọ na-eri ihe, na-aṅụkwa mmanya, n’ụlọ nwanne ha nke diọkpara.+ 14 Otu onye ozi+ wee bịakwute Job, sị: “Ìgwè ehi gị nọ na-akọ ihe,+ ìgwè nne ịnyịnya ibu gị nọkwa na-ata nri n’akụkụ ha 15 mgbe ndị Siba+ bịara wakpo ha ma chịrị ha, ha jikwa ihu mma agha gbuo ndị na-ejere gị ozi; m wee gbapụ, naanị m, ka m kọọrọ gị ihe merenụ.”+ 16 Ka onye nke a ka kpụ okwu n’ọnụ, onye ọzọ bịara wee sị: “Ọkụ nke Chineke si n’eluigwe+ daa wee ree atụrụ gị na ndị na-ejere gị ozi, regbuokwa ha; m wee gbapụ, naanị m, ka m kọọrọ gị ihe merenụ.” 17 Ka onye nke ahụ ka kpụ okwu n’ọnụ, onye ọzọ bịara wee sị: “Ndị Kaldia+ kere onwe ha ụzọ atọ wee wakpo kamel gị ma chịrị ha, ha jikwa ihu mma agha gbuo ndị na-elekọta ha; m wee gbapụ, naanị m, ka m kọọrọ gị ihe merenụ.” 18 Ka onye nke a kwa ka kpụ okwu n’ọnụ, onye ọzọkwa bịara wee sị: “Ụmụ gị ndị ikom na ndị inyom nọ na-eri ihe, na-aṅụkwa mmanya,+ n’ụlọ nwanne ha nke diọkpara. 19 Ma, lee! oké ifufe+ si n’ebe ala ịkpa bịa, wee fekwasị nkuku anọ nke ụlọ ahụ, o wee dagbuo ụmụ gị. M wee gbapụ, naanị m, ka m kọọrọ gị ihe merenụ.” 20 Job wee bilie dọwaa+ uwe elu ya nke na-enweghị aka, kpụọkwa ntutu+ isi ya wee gbuo ikpere n’ala,+ kpudo ihu n’ala, kpọọ isiala.+ 21 sị: “Agba m ọtọ si n’afọ nne+ m pụta, M ga-agbakwa ọtọ laghachi n’ebe ahụ.+ Ọ bụ Jehova nyere,+ ọ bụkwa Jehova weere.+ Ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi.”+ 22 N’ihe a niile, Job emehieghị, o kwujọghịkwa Chineke.+